Ngwaọrụ iji mata egwu amaghi | Akụkọ akụrụngwa
Ngwaọrụ 5 iji chọpụta ụda ma ọ bụ abụ amaghi
Ọtụtụ n’ime anyị emetụla ma ọ dịkarịa ala otu oge na ndụ anyị anyị nwere isi anyị n’abụ na abụ olu ụtọ ya ma anyi amaghi ihe aha ya bu ma obu onye dere ya.
Ọ bụrụ na anyị anụ ya n'isi mgbe ahụ anyị nwere obere ndumodu iji, Naanị, anyị nwere ike ịgbanwe abụ ya ka otu enyi anyị gwa anyị aha abụ ahụ. Ọ bụrụ na anyị enweghị enyi nso, anyị nwere ike iji ụfọdụ ngwaọrụ ga-enyere anyị aka ịmata abụ ndị a, na-achọ naanị igwe okwu na-eme ihe ka kọmputa wee nụ ihe anyị na-eme.
1 Tụrụ aro ngwaọrụ mata amaghi songs
5 4. ọdịyoTag
Tụrụ aro ngwaọrụ mata amaghi songs
Mgbe a na-ekwu maka ngwa ọrụ dị ka ndị ọzọ nwere ike inyere anyị aka mata egwu amaghi nke mbụ anyị na-ezo aka na ndị anyị nwere ike iji na ihe nchọgharị Internetntanetị ma ọ bụ ndị nwere ike itinye na kọmputa nkeonwe. Ọ bụrụ na nke mbụ na-eduzi anyị (ngwa dị n'ịntanetị) anyị ga-ekwe ka nkwanye dị iche iche jiri ihe ndị dị mkpa iji nwee ike ịme ka ụda olu rụọ ọrụ site na igwe okwu. Imirikiti ngwa ndị anyị ga-ahụ bụ n'efu, nke anyị ga-edepụta ole na ole ị nwere ike iji n'oge ọ bụla.
Uzo mbu nke anyi gha ekwu banyere n’oge a nwere aha nke «Midomi»And nwere ike iji naanị ihe nchọgharị Internetntanetị gị na-agba ya. Ozugbo ị gara URL ya, ị ga-ahụ bọtịnụ yiri nke anyị ga-edebe n'okpuru.
Mgbe ịpịrị ya, windo mmapụta ga-apụta na-arịọ gị ikike iji rụọ ọrụ ntinye okwu ma si otu a, mata ihe ị ga-eme hum n’oge ahụ. Irè nke ngwá ọrụ a dị oke elu, nke ga-enye gị nọmba dị iche iche nke nsonaazụ na nke ị ga-ahụ n'ezie egwu ị na-achọ ịmata.
Ọzọ ọzọ anyị nwere ike iji si n'aka «Shazam«, Nke ngwa ngwa ghọrọ ewu ewu dị ka otu n'ime gam akporo ngwa kasị jiri ndị chọrọ ịmata abụ. Ugbu a ị nwere ike iji ya na kọmputa nkeonwe mana naanị na sistemụ arụmọrụ sitere na Windows 8.1 gaa n'ihu.
Nke a bụ n'ihi na nke a ọzọ (Shazam) fna-ejikọ dị ka "ngwa ọgbara ọhụrụ" ya mere, ọ ga - apụta naanị na mpaghara taịliki nke sistemu arụmọrụ Microsoft a.
Ọzọ ọzọ na ị nwekwara ike iji mata amaghi songs nwere aha «musiXmatch«, Nke nwekwara ụdị maka kọmputa nkeonwe, naanị na Windows 8.1 sistemụ arụmọrụ dị ka nkwupụta ahụ anyị kwuru n’elu.
The interface dị yiri nnọọ ka weghara na anyị enịm ke n'elu akụkụ, ebe onye ọrụ naanị nwere na-emetụ (ma ọ bụ pịa) button na-amalite humming song ha chọrọ ịmata.
Ọ bụrụ na ike gwụrụ gị nke humming ma ọ bụ na ị bụghị nanị na mma na ya, nwere ike ị chọrọ na-agbalị "AudioTag", nke na-arụ ọrụ na a kpamkpam dị iche iche n'ụzọ karịa n'elu-kwuru amụma.
Nke a bụ n'ihi na ngwa ọrụ ga - enyere gị aka mbubata song (na kwere formats) gaa na nyocha ya iji chọọ nchekwa data ya ihe dịka nde 15 ọzọ. Obi abụọ adịghị ya, nke a bụ nhọrọ maka ndị, n'aka nke ọzọ, chọrọ ịmata aha onye edemede nke abụ a kwuru yana aha ya, ọ bụrụ na edeghị aha ya na nke ezigbo.
A ikpeazụ ọzọ na anyị ga-akwado maka ugbu a nwere aha «Chika Okpala«, Nke na-akawanye kpọkọta akụkụ nke ọrụ nke ngwaọrụ ndị anyị kpọtụrụ aha na mbụ.
Ọ bụrụ na ị attentionaa ntị na njide anyị jidere n'elu ị ga-enwe ike ịghọta ya. Lee ị nwere ike họrọ "hum" na nhọrọ nke ga - enyere gị aka ịdekọ ụda ahụ, ma ọ bụ ị nwekwara ike bulite faịlụ egwu ị nwere ike ịchekwa na kọmputa gị; nhọrọ ole na ole ndị ọzọ dị na ala nke ngwa a, nke ga - enyere gị aka ịmata abụ ị na - achọ ịchọta ngwa ngwa. Dịka ọmụmaatụ, ị nwere ike ịkọwapụta ụdị egwu dị iche iche yana asụsụ a na-asụ ma ọ bụ abụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » software » Ngwaọrụ 5 iji chọpụta ụda ma ọ bụ abụ amaghi
Etu esi ebuputa ibe edokọbara na ọkacha mmasị n’etiti ọtụtụ ihe nchọgharị weebụ
New usoro na-ezu ohi iCloud paswọọdụ